मिस नेपाल २०१९ को काठमाडौँ अडिसनमा निर्णायक रचना गुरुङ शर्माद्वारा प्रतियोगीको अपमान, विश्वभर भिडियो भाईरल हुदै (भिडियो सहित)
Posted on April 6, 2019 April 6, 2019 by Npnews
काठमाण्डौ, २२ चैत्र । सुन्दरी प्रतियोगिता मिस नेपाल २०१९ को अडिसन सुरु भइसकेको छ । पहिलो अडिसन काठमाडौँमा भएको थियो जुन अडिसनको भिडियो पनि सार्बजनिक भइसकेको छ । अडिसनको भिडियो बाहिरीए संगै एक निर्णायक विवादमा तानिएकी छन । उनि हुन् वर्षौ अगाडी देखि मिस नेपालको कोच तथा निर्णायक मण्डलमा रहदै आएकी रचना गुरुङ ।
अडिसनमा एक युवती अगाडी आउछिन त्यस लगत्तै रचना गुरुङको कडा प्रश्नहरुको प्रहार हुन थाल्दछ । ति युवती बिना मेकअप र पावरवाला चस्मामा उपस्थित हुन्छिन । निर्णायक मध्यकी रचना गुरुङले किन मेकअप नगरेको भनेर सोध्छिन र ति युवतीको जवाफ आउछ – साच्ची भन्नु पर्दा मलाई मेकअप गर्न नै आउदैन तर म सिक्छु ।
त्यो सुनेर गुरुङले अझ रिसाउदै भन्छिन – २१ औ शताब्दीमा पनि मेकअप गर्न नआउने अनि मिस नेपालमा भाग लिन आउने ? तपाईलाई थाहा छ विश्व तपाईको हातमा छ । हामीहरु कम्तिमा पनि तपाईले मेकअप लगाएर यहा आएको आशा गर्दछौ । मेकअप नगरि यहाँ आउनु भनेको हाम्रो अपमान गर्नु हो ।’
ति निर्णायक यतिमै रोकिदैनन, उनले लगत्तै चस्माको पावर कति हो भनेर सोध्छिन । युवतीले माइनस पाच भन्छिन । अनि निर्णायकको प्रश्न आइ हाल्छ, कन्ट्याक लेन्स लगाउनु हुन्छ ? किन आज लगाउनु भएन ? त्यसपछि युवतीले भन्छिन – म बाइकमा आएको हुदा प्रदुषणले गर्दा केहि हुन्छ कि भनेर नलगाएको ।
यी सम्बादहरु हुदा निर्णायक निक्कै आक्रोशित मुद्रामा जस्तो देखिन्थिन । अहिले अडिसनको उक्त क्लिप सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । निर्णायक रचना गुरुङ प्रति धेरैको असन्तुष्टि भएको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस उक्त अडिसनको भिडियो :
पुरा अडिसनको भिडियो तल हेर्नुहोस :
आजको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७५ साल चैत्र २३ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०१९ अप्रिल ०६ तारिख
५ वटा सरकारी अफिसमा ‘छड्के’, कतै मुख्य गेटमा ताल्चा, कतै कार्यालय सहयोगी मात्रै (भिडियो सहीत)